Naqshad Cabbiraad ah sida loo xakameeyo wadamada qaar ka soo galaya boggaaga
Haddii aad leedahay websaydh ama blog, waa inaad garato xaqiiqda ah in la heli karo dhammaan dalalka oo dhan. Meelo kala duwan ma aha mid ku haboon dadka ku nool gobollada kale, sidaa daraadeed waa in aynaan filaynin gaadiidka iyo booqashooyinka muhiimka ah. Tusaale ahaan, haddii aad haysatid maktabadda xaafadaada iyo suuqgaadu waa dadka wadankaaga, markaa uma baahnid inaad u ogolaato wadamo kale in ay ku xereeyaan bacda fidsan ee adeegahaaga.
Waxaa jira sababo kala duwan oo loo joojin karo helitaanka dalalka qaarkood waa lagama maarmaan. Sababta ugu fiican waxay tahay in goobtaadaadu ay wax u qabato dadka maxalliga ah oo aan waxba ka qabin dadka dibedda, sidaas darteed waxaad joojin kartaa Google, Bing, iyo Yahoo si ay u tusaan boggagaaga dawladahaas. Halkaan, Ross Barber, 10 Semt Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa ka hadlay hababka ugu caamsan ee lagu xakameynayo dalalka:
1 - peru treks and adventure. Faylka .htaccess
Haddii aad tahay webmaster, waxaad ogaan kartaa in faylka faylka .htaccess uu ka faa'iideysan karo goobtaada siyaabo badan. Khasaarada legiters iyo spammers waxay u adeegsadaan xayawaanka iyo beeraha si ay hawshooda u gutaan. Si kastaba ha ahaatee, webmaster, si kastaba ha ahaatee, waxay xakameyn kartaa cinwaannada IP-da laga shakisan yahay si ay khawariistu aanay u samayn karin waxyaabo xun oo online ah. Faylkaaga .htaccess waxay u badan tahay inuu kobciyo kumanaan xarfaha qoraalka ah haddii aad horjoogsato dalalka aan la rabin. Tani, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad siisid koodh gaar ah ee faylka .htaccess, koodhuna waa:
Amar Deny, U ogolow
Aan diidin laga bilaabo 1.1.1.1
Laga soo bilaabo 2.2.2.2
Iska diiddan 3.3.3.3
2. Isticmaal shirkadda martigalinaysa adeega xannibista
Waxaad isticmaali kartaa adeegga martigelinta ee bixiya adeegyo xakameynaya waddan kale. GoDaddy waa shirkada kaliya ee martigelisa ee bixisa adeeggan qiimaha bil kasta ah.
3. Bare Birta
Birta qaawan, sidoo kale loo yaqaan VPS, waa mashiinka aad isticmaali karto si aad u xakameyso dalalka aan la rabin. Laga soo bilaabo qalabka kombiyuutarrada ee adeega martigelinta iyo guddiga koontaroolka, birta qaawan waxay keenaysaa wax kasta oo gacmahaaga ah. Seddex doorasho oo caan ah oo caan ah oo aad ku tegi karto waa DigitalOcean Droplet, Rackspace, iyo InMotionHosting. Google magacyadooda iyo faahfaahinta jeegga.
4. Isticmaal taleefannada IP-ga ee IP
Shirkadda martigelinta ee aad isticmaalayso ayaa kaa caawin kara inaad xakamayso cinwaanada IP-ga iyada oo loo marayo guddiga kantaroolka. Waxaad si toos ah ugala xiriiri kartaa oo aad weydiisan kartaa inay ku rakibaan IP blocker on your ppanel si aad u xakameyso IP-yada waddamada aadan doonaynin in aad ka hesho gaadiidka.
5. Joojinta ama Geo xaddidaadda
Xayiraadda Goobta ayaa noo ogolaaneysa inaan doorano dalal aan rabno inaan xaddidno helitaanka. Iyadoo la isku-hagaajinayo xuruufaha ama liiska madow ee dalalkaas, waxaad si sahlan u xakameyn kartaa bixinta macluumaadkaaga internetka iyada oo loo marayo Amazon CloudFront. Akamai waa doorasho kale oo la raaco. Haddii aad haysato CDN gaarsiinta waxyaabaha aad ka sameysey shabakadda, waa inaad ka welwelisaa isticmaalka aan faa'iido lahayn ee bandwidth. Ka taxadar adeega Joomatarka iyo helitaanka waxqabadka si dhammaystiran.
6. Module Apache
Haddii aad haysatid Module Apache, uma baahnid inaad buuxiso feylka faylka ee xarfaha badan ee IPs. Maxmind wuxuu na siiyaa xogta bilaashka ah ee aan u isticmaali karno si loo xakameeyo IP-yada aan la rabin ama shaki. GeoLite2 waa ikhtiyaarka ugu fiican ee la raaci karo waana lacag la'aan.